ဆရာကြီး ကြည်လွင်မြင့် ပြောတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ နေ့တိုင်း “ချင်း” စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeဆရာကြီး ကြည်လွင်မြင့် ပြောတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ နေ့တိုင်း “ချင်း” စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
January 12, 2021 Writer Magic Knowledge 0
စာရေးသူ – ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ)
စာရေးသူ၏ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးသည် လက်ဖက်ရည် အလွန်ကြိုက်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဈေးရောင်းရင်း ဆိုင်ထိုင်ရင်း တစ်နေ့လျှင် လက်ဖက်ရည် အချို့ပေါ့ကျ တစ်နေ့လျှင် သုံးခွက်၊ လေးခွက် သောက်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့ သောက်နည်းမှာ အခြား သူများနှင့် မတူ ချင်းကို ခပ်ပါးပါး လှီးထားသော အဖတ်ကလေး များကို နှစ်ဖတ် သုံးဖတ်မျှ လက်ဖက်ရည် ထဲတွင် စိမ်ထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း သောက်သည်။ သူ၏ လက်ဖက်ရည်မှာ ချင်းရနံ့ကလေး သင်းနေသည်။
မကြာသေးမီ ကလည်း ကျန်းမာရေး ဂျာနယ် တစ်စောင်တွင် အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရှင် များက ဘလက် ကော်ဖီတွင် ချင်း ထည့်သောက် ခြင်းဖြင့် ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာကို သက်သာ စေကြောင်း ရေးထားသည်ကို ဖတ်ရှု လိုက်ရသည်။ ချင်းကို နာကျင်ကိုက်ခဲ ဝေဒနာ ကုသ ရာတွင်လည်း အသုံးပြုကြောင်း ရေးသား ထားသည်။ ချင်းကို အရည်ထုတ် ယူပြီး ဗိုက်အောင့် ဝေဒနာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင် ဖြစ်သော ဝေဒနာများ တွင်လည်း သုံးစွဲသည်ဟု ရေးသား ထားသည်။
ချင်းသည် မူလက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရဆေး ကုန်သည်များမှာ အိန္ဒိယ လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
ချင်းခြောက်ကို မပုပ် မသိုးစေရန် ထုံးရည်ဖျန်းပြီး သဘေ်ာကြီး များဖြင့် သယ်ဆောင် တင်သွင်း လာသဖြင့် သင်း​ဘောချင်းခြောက် ဟူသော အသုံးအနှုန်းမှာ ယနေ့ အထိ ပရဆေး လောကတွင် သုံးစွဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ကျောက်မဲချင်း၊ အောင်ပန်းချင်း၊ ကျောက်ဆည်နယ် သံရွာချင်းတက် တို့သည် အတက်ကြီးပြီး အပူဓာတ် အားကောင်း သဖြင့် နာမည် ကျော်ကြားသည်။ လူကြိုက် များသော ချင်းတက်များ ဖြစ်သည်။
ထိုသိုအအေးပတ် ခြင်းကို ချင်း လက်ဖက်ရည် သောက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ် နိုင်သည်။ မိမိအိမ်တွင် သောက်နေကျ ရေနွေးကြမ်း ထဲသို့ ချင်းပါးပါး နှစ်လွှာ သုံးလွှာ လှီးထည့်ပြီး ပူပူလေး သောက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ် နိုင်သည်။
၁။ ချင်းကိုပါးပါးလှီး (၇)လွှာ၊ သံပုရာသီးတစ်ခြမ်း၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်း ရေနွေးစိမ်သောက်ပါ။ နေ့စဥ်တစ်နေ့မတ်ခွက်တစ်ဝက်သောက်ရုံဖြင့် အဆီကျပြီး ကျန်းမာစေသည်။
၃။ ဇက်ကြောတက်လျှင် ချင်းတက်ပါးပါးလှိး ဇက်ရင်းနှင့် ပခုံးတလျှောက်မှာကပ်ပါ။
၄။ အဖျားအနာ မှန်သမျှ ချင်းပြုပ်ရည် သောက်ပေးလျှင် အခိုးပွင့်ပြီးသက်သာစေသည်။
၅။ ရှေးက မြန်မာလူမျိုးများ ဖျားလျှင်သောက်သုံးခဲ့သည့် အခိုးပွင့်ဆေးမှာ ချင်း၊ကွမ်းရွက်၊ထန်းလျက်ပြုပ်ရည်ဖြစ်သည်။
၆။ ညှော်မိ၊အနာဝင် ငန်းမန်းတက်ဖျားလျှင် ချင်း၊ကွမ်းရွက်၊ကြပ်ခိုး၊ ဆားလှော်အနည်းငယ် ထည့် ပြုပ်သောက်လျှင် သက်သာသည်။
၇။ ချင်းသည် သွေးကျဲစေသောသတ္တိရှိသဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဥ်းရောဂါ၊ ခြေထောက် သွေးမလျှေက်ရောဂါရှိသူများ ချင်းတက်အစိုကို ထုထောင်း၍ အရည်ညှစ်ယူပြီး ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း သောက်ပေးပါ။ ပိန်စေလိုလျှင် သံပရာရည် ရောသောက်ပါ။ အစာကြေစေလိုလျှင် ပျားရည်တစ်ဇွန်း ရေားစပ်သောက်ပါ။
Credit – ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) ၁၁ . ၁ . ၂၀၂၁
ညောင်ရွှေ-ခေါင်တိုင် လမ်းမပေါ်မှာ ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့ Mask အခုရေ ၂၀၀၀